ချဲလ်ဆီး ပစ်မှတ် စတာလင်ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် မဟုတ်ပေမယ့် ၊ အခြား မန်စီးတီး တောင်ပံ ကစားသမား ၂ဦးထက် ပိုကောင်းကြောင်း ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ဒန်နီ မာဖီ - xyznews.co
ချဲလ်ဆီး ပစ်မှတ် စတာလင်ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် မဟုတ်ပေမယ့် ၊ အခြား မန်စီးတီး တောင်ပံ ကစားသမား ၂ဦးထက် ပိုကောင်းကြောင်း ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ဒန်နီ မာဖီ
ပိုင်ရှင်သစ် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာပြီးနောက် ၊ ချဲလ်ဆီး အသင်း နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် ဟာ ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ စျေးကွက် အတွင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီကထက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပိုရထားပြီး ၊ ရိုမီလူ လူကာကူရဲ့ အင်တာမီလန်သို့ အငှား အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်မြောက်ဖို့ကိုလည်း တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် ဟာ လစ်လပ်သွားတဲ့ အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ ၊ အန်ဒရီယာစ် ခရစ်တန်ဆန်တို့ရဲ့ နေရာကို အစားထိုး ဖြည့်တင်းဖို့ အဓိက ပစ်မှတ်ထားနေပေမယ့် ၊ လူကာကူ ချဲလ်ဆီးကနေ ယာယီ ထွက်ခွာဖို့ သဘောတူညီမှု ရပြီးနောက် ၊ တိုက်စစ် အတွက်ပါ အဆင်ပြေသလို ကစားသမားသစ် ဖြည့်တင်းမှုတွေ လုပ်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ် ။
မန်စီးတီး အသင်းနဲ့ တနှစ် စာချုပ်သာ ကျန်ရှိတော့တဲ့ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် တောင်ပံ ကစားသမား ရာဟင်း စတာလင် ဟာ တူချယ်ရဲ့ ပထမ ဦးစားပေး ပစ်မှတ် ဖြစ်ပြီး ၊ လက်တွေ့ကျကျ အချက်အလက်ကျကျ ကြည့်ရင်လည်း ၄င်းဟာ လက်ရှိ ချဲလ်ဆီး တောင်ပံ ကစားသမား အားလုံးထက် ပိုမို သာလွန် ကောင်းမွန်နေတာ တွေ့ရပါတယ် ။
နှစ်တိုင်းလိုလို ပြိုင်ပွံစုံ ၁၀ဂိုးနဲ့ အထက် ပုံမှန် သွင်းပေးနေပေမယ့် ၊ စတာလင် ဟာ နောက်ပိုင်း ဘောလုံးရာသီတွေမှာ စီးတီး နည်းပြ ပက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ အလေးပေးမှုကို ရရှိခဲ့ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး ။ ဒီအတွက်ကြောင့် ချဲလ်ဆီးဖက်ကသာ အပြောင်းအရွှေ့ ကမ်းလှမ်းမှု ခိုင်မာခဲ့ရင် စတာလင် မန်စီးတီးက ထွက်ခွာဖို့ သေချာသလောက် ဖြစ်လာဖို့ ရှိနိုင်ပါတယ် ။
လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဒန်နီ မာဖီ ကတော့ စတာလင် ဟာ သူ့ရဲ့ အမြင်မှာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး စာရင်းဝင် ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမား မဟုတ်ပေမယ့် ၊ အခြား မန်စီးတီး တောင်ပံ ကစားသမား ၂ဦး ဖြစ်တဲ့ ဂျက်ဂရီးလစ်ရှ် ၊ ရီယဒ် မာရက်ဇ်တို့ထက် ပိုကောင်းတာကြောင့် ၄င်းကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ရင် ချဲလ်ဆီး ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ သာမန် ပျော်ရွှင်တာထက် ပိုပြီး ဝမ်းမြောက်သင့်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ် ။
Talksport နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ ဒန်နီ မာဖီ က ” ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတွေကို အကောင်းဆုံး စာရင်းဝင်တွေ အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ် ။ စတာလင် ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကို မှီဖို့ တဆင့်လောက် လိုသေးတဲ့ ကစားသမားမျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆိုတာ အနည်းအကျဉ်းသာ ဖြစ်သင့်ပါတယ် ။ ”
” ခင်ဗျားဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတွေ အကြောင်း ပြောတဲ့နေရာမှာ လီယွန်နယ် မက်ဆီ ၊ ခရစ်တီယာနို ရော်နယ်ဒို ၊ နေမာ ၊ ကီလီယန် အမ်ဘတ်ပေ အစရှိတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ကစားသမား အနည်းစုကိုသာ အသားပေး ပြောရပါမယ် ။ ကမ္ဘာ့အဆင့်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အောက်မှာ ခင်ဗျား စိတ်တိုင်းကျ ကစားသမားတွေ လျှောက်ထည့်လို့ မရပါဘူး ။ ”
” ဒါပေမယ့် စီးတီးရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမားတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ ခင်ဗျားဟာ စတာလင်ကို ကျော်ပြီး ဂရီးလစ်ရ်ှကို နေရာပေးမှာလား ? ကျွန်တော်တော့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်ဟာ ဂရီးလစ်ရ်ှရဲ့ အမာခံ ပရိသတ် တဦး ဖြစ်ပေမယ့် ၊ စတာလင်က သူ့ထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ”
” မာရက်ဇ်နဲ့ ယှဉ်လာရင်လည်း ကျွန်တော် စတာလင်သာ ရွေးရပါမယ် ။ မာရက်ဇ် ဟာ နည်းစနစ် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပေမယ့် ၊ ခင်ဗျားဟာ စတာလင်ဆီကနေ ခံစစ် အတွက် ပိုကူပေးဖို့ အားထားရနိုင်ပါတယ် ။ ပွဲကြီးတွေမှာဆို မာရက်ဇ်ထက် စတာလင်ကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရပါမယ် ။ ”
” စတာလင် ဟာ ကျွန်တော့ရဲ့ မန်စီးတီး အကောင်းဆုံး ၁၁ယောက် အသင်းထဲ ဝင်နိုင်လား ? သေချာပေါက်ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ပက်အတွက်တော့ သူဟာ လုံလောက်မှု မပေးစွမ်းနိုင်တော့တဲ့ ပုံပါပဲ ။
ဒီ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ စျေးကွက် အတွင်းမှာ ပက်ဟာ စတာလင်ကို ထွက်ခွာခွင့် ပေးဖို့ များပါတယ် ။ ကျွန်တော်သာ ချဲလ်ဆီး ပရိသတ် တယောက်ဆိုရင် စတာလင် ရောက်လာမှာကို ဝမ်းသာတာထက် ပိုပြီး ပျော်ရွှင်မိမှာပါ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
Previous Article ယူရို သန်း 50 နဲ့ အရောင်းစာရင်း တင်ခံထားရတယ်လို့ သတင်းတွေ ကြီးနေတဲ့ နေမာ
Next Article ဂန္တဝင် ကျောနံပါတ် ၁၄ ကို ရယူခြင်းကြောင့် ဖိအားတွေ ရှိနေတဲ့ အပေါ် တုန့်ပြန် ပြောကြားလိုက်တဲ့ အန်ကီတီးယား